बुढेसकालमा Xarelto का साइड इफेक्टहरू के छन्? - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कल्याण चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार मनोरञ्जन भारी खेल समुदाय, कम्पनी समाचार, कल्याण औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि बनाम मित्र समाचार कम्पनी, चेकआउट
मुख्य >> औषधि जानकारी >> बुढेसकालमा Xarelto का साइड इफेक्टहरू के छन्?
बुढेसकालमा Xarelto का साइड इफेक्टहरू के छन्?
Xarelto rivaroxaban को ब्रान्ड नाम संस्करण हो। यो रगत पातलो हो जसले केही हृदय सम्बन्धी शर्तहरू भएका मानिसहरूलाई रगत क्लोट हुने जोखिम कम गर्दछ, र यसले स्ट्रोकको जोखिमलाई पनि कम गर्न सक्छ। Xarelto सामान्यतया वरिष्ठहरुलाई सिफारिस गरिएको हुन्छ तर युवा वयस्कहरूको भन्दा उमेर वयस्कहरूमा बढी साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ। यो रगत पातलो किन सिफारिस गरिएको हो र Xarelto का बुढेसकालमा पार्ने दुष्प्रभावलाई हामी गहिराईमा हेरौं।
रगत पातलो किन वरिष्ठ माग्ने छन्?
रक्त पातलो, जसलाई एन्टिकोआगुलेन्ट्स पनि भनिन्छ, औषधी हो जुन शरीरलाई रगतको थक्का बनाउनको लागि लाग्ने समयको मात्रालाई लम्बाइदिन्छ। Xarelto एक कारक Xa अवरोधक हो, जो एन्टीकोआगुलेन्टको एक प्रकार हो जसले एंजाइम थ्रोम्बिनलाई गठन गर्नबाट रोक्दछ, जसले रगतको थक्काको गठनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। सीनियरहरूसँग प्राय जसो रगतको थक्काहरू हुने खतरा बढी हुन्छ, र रगत पातलोको कडा एन्टिकोएगुलेसन प्रभाव हुन्छ।
त्यहाँ धेरै प्रकारका स्वास्थ्य अवस्थाहरू हुन्छन जुन वृद्धहरूलाई रगत पातलो लिन आवश्यक पर्न सक्छ। यहाँ केहि सर्तहरू छन् जुन रगत पातलो प्रिस्क्रिप्सन जायज ठहरिन्छ।
गैरभ्यावुलर एट्रियल फाइब्रिलेशन: यस प्रकारको एट्रियल फाइब्रिलेसन हार्ट भल्भ समस्याको कारणले हुदैन, तर यसले द्रुत र अनियमित धडकन ल्याउँछ। किनभने यो अवस्थाले रगत प्रवाहमा बाधा पुर्‍याउँछ र रगतको थक्का पाउने जोखिम बढाउँदछ, धेरै व्यक्तिहरू जसलाई यसमा रगत पातलो लिन आवश्यक पर्दछ, र क्लिनिकल परीक्षणहरू Xarelto एट्रियल फाइब्रिलेशनका साथ व्यक्तिहरूको लागि सुरक्षित र प्रभावकारी छ भनेर देखाएको छ।
डीप वेन थ्रोम्बोसिस (डीवीटी): डीवीटी एक यस्तो अवस्था हो जहाँ रगत भित्रै रगत भित्रै हुन्छ, सामान्यतया तल्लो खुट्टा वा फिलामा। यो अवस्था जीवन खतरामा पर्ने हुन सक्छ यदि यसले पल्मोनरी एम्बोलिजमको कारण दिन्छ। लक्षण वा डीभीटीको निदानका साथ व्यक्तिले रगत पातलो लिन रगतको थक्का बिग्रनबाट जोगाउन र कुनै नयाँ बन्नबाट रोक्न सक्छ।
पल्मोनरी एम्बोलिजम: TO पल्मोनरी एम्बोलिजम के हुन्छ जब डीभीटी रगत क्लोट ढिलो हुन्छ जहाँबाट यसको गठन हुन्छ र फोक्सोको फोक्सोको धमनी मध्ये एकमा सर्छ। यसले छातीमा दुखाइ, सास फेर्न सक्ने समस्या निम्त्याउन सक्छ, र यदि यो रगत पातलो वा प्रक्रियाहरूका साथ उपचार गरीएको छैन भने प्राणघातक हुन सक्छ।
कोरोनरी धमनी रोग (CAD): सीएडी मुटुमा धमनीहरूको संकुचन वा अवरोधद्वारा चिह्नित हुन्छ। क्याडसँग ब्यक्तिसँग रगत क्लोट हुने जोखिम बढेको छ जुन स्ट्रोक वा हार्ट अट्याक हुन सक्छ।
परिधीय धमनी रोग (PAD): क्याडसँग जस्तै, पेरीफेरल धमनी रोग भएका मानिसहरूलाई रगतको थक्की हुने सम्भावना बढी हुन्छ र ती कारणले गर्दा हार्ट अटैक वा स्ट्रोकको अनुभव गर्दछ। PAD खुट्टा, हतियार, र टाउको मा धमनि को एक साँघुरो द्वारा विशेषता हो।
घुँडा वा हिप प्रतिस्थापन सर्जरी: ढल्कँदो उमेर वयस्कहरूलाई प्राय: जीवनमा घुँडा वा हिप प्रतिस्थापन शल्यक्रियाको आवश्यकता पर्दछ, र यस्ता प्रकारका शल्यक्रियाले रगत थक्का हुने जोखिम बढाउन सक्दछ। कहिलेकाँही डाक्टरहरूले घुँडा वा हिप प्रतिस्थापन सर्जरी पछि Xarelto जस्तो रगत पातलो सल्लाह दिन्छन्।
Xarelto जस्ता रक्त पातलोहरू रक्तको थक्कीहरू उपचार र रोकथामको लागि महान हो तर तिनीहरू पनि केही साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्ने बढी जोखिमको साथ आउँदछन्। किनभने रगत पातलोले रगतको मोटाईमा असर गर्दछ, तिनीहरू प्रायः रक्तस्राव-सम्बन्धित साइड इफेक्टसँग सम्बन्धित छ। उनीहरूले रगत कोष गणनामा पनि असर पार्दछ, जसले लक्षणहरूको एक विशिष्ट सेट हुन सक्छ।
काउन्टर मा गर्भवती हुँदा मँ मतली को लागी के लिन सक्छु
सामान्य साइड इफेक्टहरू
यहाँ Xarelto को सबै भन्दा साधारण साइड इफेक्टहरू छन् जुन वरिष्ठले अनुभव गर्न सक्छन्:
रक्तस्रावको बढेको जोखिम
सजीलो चोट लाग्ने
कटौतीबाट लामो रक्तस्राव
आन्द्रा वा मूत्राशय डिसफंक्शन
अनुभवको यो जोखिम रगत Xarelto को एक साइड प्रभाव को रूप मा बढ्नेछ यदि यो एकै समयमा केही अन्य औषधिहरूको रूपमा लिएको छ। यहाँ औषधीहरूको सूची छ जुन नकारात्मक ड्रग अन्तरक्रियालाई निम्त्याउन सक्छ:
अन्य इंजेक्शन वा मौखिक aantoagulants
गैर-स्टेरॉइडल विरोधी भड़काऊ ड्रग्स (NSAIDs)
हेपेरिन युक्त औषधी
चयनित सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ताहरू (एसएसआरआई)
सेरोटोनिन नोरपाइनफ्रिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ताहरू (SNRIs)
Xarelto लिनुले अधिक गम्भीर साइड इफेक्ट पनि निम्त्याउन सक्छ, विशेष गरी वरिष्ठहरूको लागि। Xarelto लिइरहेको बेला तपाईंले तलका कुनै पनि साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्नुभयो भने तपाईंले तत्काल मेडिकल हेरविचार गर्नुपर्छ।
अनियन्त्रित वा असामान्य रक्तस्राव
रातो, गुलाबी, वा खैरो मूत्र
रगतको थोकहरु खोकी
बान्की जुन कफी मैदान जस्तो देखिन्छ
यो महत्त्वपूर्ण छ कि Xarelto लिइरहेका व्यक्तिहरूले तत्काल मेडिकल उपचार खोज्नु पर्छ यदि उनीहरूसँग यी कुनै साइड इफेक्टहरू छन् भने किनभने उनीहरूले संकेत गर्दछ कि त्यहाँ छ। आन्तरिक रक्तस्राव , जठरांत्र रक्तस्राव, वा मस्तिष्क रक्तस्राव (इन्ट्राक्रानियल हेमोर्रेज) भइरहेको छ। यी प्रकारका रक्तस्रावका घटनाहरू Xarelto लिने वरिष्ठहरूमा बढी सामान्य हुन्छन् र यदि उनीहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरिएको छैन भने प्राणघातक हुन सक्छ। पुरानो बिरामीहरू जो Xarelto लिने बेलामा खसेका हुन्छन् उनीहरूको डाक्टरलाई के भएको थाहा दिनु पर्दछ र आन्तरिक रक्तस्रावको कुनै संकेत खोज्नु पर्छ जुन यसले चिकित्सा सल्लाह लिने समय हो भनेर संकेत गर्दछ।
यी साइड इफेक्टको साथसाथै Xareltoaको साथ आउँछ बक्से चेतावनी यसले समयपूर्व औषधि रोक्न सावधानी अपनाउँछ किनकि यसले रग वा धमनी अवरुद्ध गर्दा रगतको थक्काको खतरा बढ्न सक्छ। निर्माताका निर्देशनहरू सुझाव दिन्छ कि Xarelto को सट्टामा रगत पातलो लिनु पर्छ यदि प्रमुख रक्तस्राव घटनाहरू बाहेक अरू कुनै कारणका लागि औषधी रोक्न आवश्यक पर्‍यो। यसले Xarelto लिइरहेको व्यक्ति अनावश्यक र सम्भावित जीवन-जोखिमयुक्त रगतको थक्की अनुभव गर्दैन भनेर सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।
Xarelto एक जोखिम को वृद्धि को लागी दोस्रो बक्से चेतावनी को साथ आउँछ मेरुदण्ड / एपिड्युरल हेमेटोमास । मेरुदण्डको पंचर हुने व्यक्तिहरू वा तिनीहरूको मेरुदण्ड वा एपिड्युरल क्षेत्रमा इंजेक्सन प्राप्त गर्ने व्यक्तिको रगत क्लोट हुने उच्च जोखिम हुन्छ जुन लामो अवधि वा स्थायी पक्षाघात हुन सक्छ। डाक्टरहरूले रगतको थक्काको संकेतका लागि आफ्नो बिरामीहरूलाई नजिकबाट निरीक्षण गर्नेछन्, जसमा झुनझुनी, सुन्नपन, कम्मर दुखाइ, असंयमितता, र मांसपेशि कमजोरी समावेश हुन सक्छ। यदि तपाईंसँग मेरुदण्डको पन्चर छ भने, एपिड्युरल क्याथेटर, वा तपाईंको मेरुदण्डमा इन्जेक्सनहरू प्राप्त गर्नुहोस् र यी लक्षणहरूमध्ये कुनै पनि छ भने, तपाईंले तुरुन्तै डाक्टरको उपचार लिनु पर्छ।
Xarelto कसरी लिने
Xarelto राम्रोसँग लिनु महत्वपूर्ण छ यो निश्चित गर्न यो महत्वपूर्ण छ कि यो सकेसम्म प्रभावकारी रूपमा काम गर्दछ र यसले कम से कम साइड इफेक्टको कारण गर्दछ। Xarelto ट्याब्लेट चार खुराक शक्ति मा आउँछ: २.m mg, १०mg, १mmg, र २०mg। यहाँ छन् मानक खुराक Xarelto को बिभिन्न चिकित्सा अवस्थाका लागि:
एट्रियल फाइब्रिलेसन हार्ट भल्भ समस्याको कारणले होइन: १-20-२० मिलीग्राम एक पटक साँझको खानाको साथ लिइन्छ।
डीप वेन थ्रोम्बोसिस (डीवीटी): १ mg मिलीग्राम खानाको साथ प्रति दिन दुई पटक लिन्छ, प्रत्येक दिन उहि समयमा।
पल्मोनरी एम्बोलिजम: १ mg मिलीग्राम खानाको साथ प्रति दिन दुई पटक लिन्छ, प्रत्येक दिन उहि समयमा।
कोरोनरी धमनी रोग (CAD): २. mg मिलीग्राम खानाको साथ वा बिना दिनको दुई पटक लिन्छ।
परिधीय धमनी रोग (PAD): २. mg मिलीग्राम खानाको साथ वा बिना दिनको दुई पटक लिन्छ।
घुँडा प्रतिस्थापन सर्जरी वा हिप प्रतिस्थापन सर्जरी: १० मिलीग्राम एक पटक खाना बिना वा बिना लिन्छ।
Xarelto लाई यसको अधिकतम रक्ता पातलो प्रभावमा पुग्न लगभग दुई देखि चार घण्टा लाग्छ, तर tऊ Xarelto को सटीक मात्रा जुन कसैले लिन आवश्यक छ उनीहरूको मेडिकल अवस्था, मेडिकल ईतिहास, र उमेरको आधारमा फरक पर्दछ, त्यसैले तपाईले कत्ति Xarelto लिनु पर्छ भन्ने बारे डाक्टरसँग कुरा गर्नु सधैं उत्तम हुन्छ।
एकचोटि तपाईंले आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुभयो र तपाईंलाई कति एक्सरेल्टो लिनुपर्नेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो भने, तपाईं यसलाई लिन थाल्न सक्नुहुनेछ जब सम्म तपाईं आफ्नो डाक्टरले दिएको कुनै निर्देशनहरू पालना गर्नुहुन्छ। धेरै डाक्टरहरूले बिरामीहरूले रातको खाजाको साथ Xarelto लिन सिफारिस गर्छन्। यो किनभने खाद्य र औषधि प्रशासन ( एफडीए ) जारी गरिएको जानकारीले भने कि Xarelto कम प्रभावकारी हुन सक्छ यदि यो त्यस्तो बाटोमा गरिएको छैन भने।
अधिकांश खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थहरू Xarelto सँग सेवन गर्न सुरक्षित छन्, रक्सी, अंगूर, र अंगूरको रसको अपवाद बाहेक। अध्ययन Xarelto लिँदा रक्सी पिउँदा ब्लीडिंग, चोट, र टाउको दुख्ने जोखिम बढाउन सक्छ भनेर देखाइएको छ। केही बिरामीहरूका लागि Xarelto लिने बेलामा मदिराको मध्यम सेवन ठीक हुन सक्छ, तर सुरक्षित चिकित्सकमा रहेको डाक्टरसँग जाँच्नु यो सधैं राम्रो विचार हो।
Xarelto जस्ता रगत पातलो लिने मानिसहरू अ gra्गुर फल खान वा अpe्गुरको रस पिउनु हुँदैन किनकि उनीहरूमा यौगिक हुन्छन् जुन औषधीसँग अन्तर्क्रिया गर्न र जटिलताको कारण हुन सक्छ। अर्को सिट्रस फलमा सन्तुर जस्तो स्विच गर्न यसले तपाईंलाई सिट्रस फलको लागि हुने कुनै पनि लालसाहरूलाई रोक्न मद्दत पुर्‍याउँछ र Xarelto लिँदा सुरक्षित रहन मद्दत गर्दछ।
यदि तपाईं Xarelto को एक खुराक हराउनु समाप्त, यो एकै दिन सम्झना छिटो छिटो खुराक को लागी लिनु राम्रो हो। यदि तपाईंलाई सम्झना छ कि तपाईंले एक दिन पछि खुराक छुटाउनु भयो भने, त्यसो गर्नु राम्रो हो तपाईंले अर्को खुराक लिनु पर्ने हुन्छ। Xarelto को बारे मा एक आधा जीवन छ ११ देखि १ hours घण्टा वृद्ध बिरामीहरूको लागि, जसको मतलब यो हो कि यसले शरीरलाई एक खुराकको आधा प्रक्रिया गर्न लामो समय लिन्छ। Xarelto को अतिरिक्त खुराक नलगाउनुहोस् यदि तपाईं एक खुराक याद गर्नुभयो भने। तपाईंको प्रणालीमा थप औषधि सेवन गर्नाले गम्भीर साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ। Xarelto खुराक वृद्ध बिरामीहरुमा कम गुर्दा समारोह संग कम गर्न आवश्यक पर्दछ।
Xarelto साइड इफेक्टबाट कसरी बच्ने
प्रत्येक दिन एकै समयमा Xarelto लिनाले तपाईंको शरीरलाई औषधीको लागि प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ र कहिले यसलाई लिने भनेर सम्झन मद्दत गर्दछ। यसले कुनै पनी साइड इफेक्टको अनुभवको अवसरलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईंले Xarelto शुरू गरेपछि साइड इफेक्टहरू गर्न थाल्नुभयो भने, तपाईंले औषधी खान जारी राख्नु पर्छ तर तपाईंको डाक्टरलाई थाहा दिनुहोस्। Xarelto अचानक रोक्दा तपाईंको हुने जोखिम बढाउन सक्छ झड्का वा अन्य गम्भीर साइड इफेक्टको अनुभव गर्दै।
यसलाई सुरक्षित रूपमा बन्द गर्न तपाईं Xarelto बन्द पतित हुनुपर्छ। तपाइँको डाक्टर तपाइँको लागी एक योजना को लागी आउँछ जहाँ तपाइँ Xarelto को एक निश्चित अवधि मा कम खुराक लिन हुनेछ। यसले फिर्ती लक्षण, प्रतिकूल घटनाहरू, र रगत जमाउने समस्याहरूको अनुभव गर्ने सम्भावनालाई कम गर्न मद्दत गर्दछ।
सबैभन्दा सुरक्षित रगत पातलो भनेको के हो?
Xarelto वरिष्ठ मात्र रगत पातलो छैन। यहाँ केहि अन्य सामान्य रक्त पातलो छन्:
वरिष्ठ रगत पातलो
औषधि नाम औषधि वर्ग वरिष्ठ मा मानक खुराक (+ 65 +) * वरिष्ठमा सामान्य साइड इफेक्टहरू एकलकेयर बचत अझै सिक
Xarelto (rivaroxaban) एन्टिकोआगुलेन्ट २. mg मिलीग्राम -१० मिलीग्राम प्रति दिन ब्लीडिंग, कमर दुख्ने, र कमजोरीको जोखिम बढ्यो कुपन प्राप्त गर्नुहोस् Xarelto विवरण
इलिक्विस(apixaban) एन्टिकोआगुलेन्ट २. mg मिलीग्राम -१० मिलीग्राम दैनिक रूपमा दुई पटक लिइन्छ छाती दुखाई, चोट, र चक्कर कुपन प्राप्त गर्नुहोस् एलीक्विस विवरण
Coumadin(warfarin) एन्टिकोआगुलेन्ट <5 mg per day चोट, रक्तस्राव, र कमजोरी कुपन प्राप्त गर्नुहोस् वारफेरिन विवरणहरू
Lovenox(एनोक्स्यापारिन) एन्टिकोआगुलेन्ट १ मिलीग्राम-40० मिलीग्राम subcutaneously इंजेक्शन रक्तस्राव, इंजेक्शन साइट प्रतिक्रियाहरू, र चोटहरू कुपन प्राप्त गर्नुहोस् Lovenox विवरण
प्राडक्स (dabigatran) एन्टिकोआगुलेन्ट Mg 75 मिलीग्राम - १ mg० मिलीग्राम प्रति दिन दुई पटक लिइन्छ चोट र मामूली रक्तस्राव, मतली, र ईर्ष्या कुपन प्राप्त गर्नुहोस् प्राडक्सा विवरणहरू
Arixtra (fondaparinux) एन्टिकोआगुलेन्ट २. mg मिलीग्राम -१० मिलीग्राम प्रति दिन एक पटक इंजेक्टेड ब्लीडिंग समस्या, एनीमिया, र कम रातो रक्त कोष गणना कुपन प्राप्त गर्नुहोस् Arixtra विवरण
* खुराक उपचार भइरहेको चिकित्सा अवस्थामा निर्भर गर्दछ
तीव्र खुशी को लागी9सर्वश्रेष्ठ जी स्पट कम्पनकर्ता
औसत रक्त शर्करा स्तर के हो?
के यो एक पटक मा3ibuprofen सुरक्षित छ?
जब eliquis को लागी एक सामान्य हुनेछ
म धेरै mucinex अधिकतम शक्ति मँ लिन्छु
एक अनुमानित _______ अमेरिकी वयस्कों को प्रतिशत अधिक तौल वा मोटो छ।
के म एकै समयमा एलिग्रा र बेनाड्रिल लिन सक्छु?
के तपाइँ जन्म नियन्त्रण मा रक्सी पिउन सक्नुहुन्छ?